Cumar Cabdirshiid Oo Warysi Bixiyay. – SBC
Cumar Cabdirshiid Oo Warysi Bixiyay.
Ra’iisal wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, oo ku sugan dalkan Maraykanka ayaa wareysi siiyay Golaha 88 oo ah gole lagu gorfeeyo arrimaha siyaasadda Soomaaliya, halkaasoo ay si toos ah ugu jireen kumanaan dad ah oo kala joogay Maraykanka, Yurub, Africa, Asia iyo Australia.
Ra’iisal wasaaraha ayaa wareysiga kaga hadlay arrimo badan oo Soomaaliya ku saabsan.
Ugu horreyn ra’iisal wasaare Cumar Cabdirashiid waxa uu ka hadlay socdaalka shaqo ee uu ku joogo dalkan Maraykanka, isagoo sheegay inuu ugu horreyn ku yimid martiqaad uu ka helay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay si ay warbixin uga siiyaan arrimaha Soomaaliya iyo sidii waxqabad iyo isbadal badan loo sameyn lahaa.
Waxa uu sheegay in mas’uuliyiintii ay la kulmeen ay kala hadleen sidii loo qalabeyn lahaa, laysuguna dhafi lahaa ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya
Ka takhalusudda al-Shabaab
Ra’iisal wasaaraha ayaa ka hadlay qorshaha dowladda ee la dagaalanka alshabaab maadaama hadal uu ka jeediyay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay uu ku sheegay in dowladda Soomaaliya ay al-Shabaab kaga takhalusi doonto sannad gudihiis.
Ra’iisla wasaaruhu wuxuu sheegay in “haddii aadan tallaabo qaadin adiga laguugu soo maqan yahay, sidaasi darteedna ay dowladdu todobaad ka hor gacanta ku dhigtay magaalo ay kooxda al-Shabaab weeraro ka soo abaabuli jirtay, taasoo inka badan 100km u jirta caasimadda dalka Soomaaliya.
Warar ka soo baxayay deegaanka Tooro Toorow ee gobolka Shabeelaha Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dowladda ay isaga baxeen ka dibmarkii al-Shabaab ay weerar ku rogaal celisay.
Ra’iisal wasaaraha oo wax laga weydiiyay arrintaasi ayaa sheegay in xeelad military ay ciidamada dowladda uga baxeen magaaladaasi, ee aysan ahayn itaal darri ciidanka haysa.
Doorasho ma dhici doontaa?
Raiisal wasaaraha ayaa sheegay in arrimaha Hiigsiga 2016 ay ugu muhiimsanaayeen saddex qodob oo kala ah dhammeystirka maamul goboleedyada, dib u eegista dastuurka, iyo inay doorasho ka dhacdo dalka Soomaaliya.
Wuxuu sheegay in hawlahaasi oo dhan ay dowladdu ka shaqeyneyso sidii loo suurtagelin lahaa in doorasho ay dhacdo, haddii ay suurageli weydo arrintaasi ayuu ra’iisal wasaaruhu sheegay in guddiga doorashooyinka ay ka talabixin doonaan sidii laga yeeli lahaa.
Yaa maamul loogu dhisayaa Cadaado?
Ra’iisal wasaaraha ayaa sheegay in shirka cadaado maamulka loogu sameynayo saxiixayaasha kala ah Ahlu-Sunna Waljamaaca, Ximan iyo Xeeb, iyo Galmudug.
“Runtii maamul goboleedkaasi waxa uu maamul u noqonayaa intii saxiixday heshiiskii ahaa in maamulkaasi la dhiso, intii aan ku jirinna deegaankoodiina maamul uma aha, taasaana laysku waafqansan yahay intaasi ayuuna ka hirgalayaa.”
Qabsashada Ahlu-Sunna ee Dhusamareeb
Ururka Ahlu-Sunna Waljamaaca ayaa dhowaan xoog military kula wareegay degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galguduud, halkaasoo ay horey u joogeen ciidamo dowladda federaalka taabacsan.
Ahlu-Sunna ayaa ku eedeysay dowladda federaalka in dhinaceeda ay ka hirgali waayeen heshiisyo ay horey ukala saxiixdeen labada dhinac.
Hase yeeshee ra’iisal wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa sheegay inaanay caqligal ahayn qabsasho, uuna sheegay inaanay jirin wax ay heshiisyo ka hirgeli waayeen. Wuxuu intaa ku daray marka uu Soomaaliya ku laabto ay arrintaasi geli doonaan uuna rajeynayo in xal ay ku dhammeeyaan.
Xiriirka Jubbaland iyo mooshinkii ka dhanka ahaa
Maamulka Jubbaland ayaa dhowaan sheegay inay xiriirka u jareen dowladda federaalka ka dib markii baarlamaanka federaalka uu cod u qaaday mooshin ka dhan ahaa baarlamaanka Jubbaland.
Ra’iisal wasaaraha ayaa sheegay in uu jiro guddi loo magacaabay in arrinta Jubbaland ay ka shaqeeyaan, sidaasi darteed ay la fariisan doonaan Jubaland ayna weydiin doonaan cabashadooda.
Wuxuu ra’iisal wasaaraha dhinac isaga dhigay mooshinka baarlamaanka, ka dib markii uu sheegay in caalamka ay arrintaa warmurtiyeed ka soo saareen ayna taageersan yihiin hawsha xukuumaddiisu ay waddo sidii loo xalin lahaa cabashada baarlamaanka Jubbaland.
Wareysiga Ra’iisal Wasaaraha:
Wareysiga ra’iisal wasaaraha uu siiyay Golaha 88 oo aad u dheeraa waxa uu ka hadlayaa arrimo badan oo ku saabsan marxaladda siyaasadeed iyo tan amni ee Soomaaliya.
Waxaana wareysiga la yeeshay Wariye Sooyaal.
Xigasho: Golaha 88 News.